Madaxweyne Siilaanyo Oo Qalinka Ku Duugay Dhaqangelinta Miisaaniyadda Qaranka Ee 2011 | Araweelo News Network (Archive) -
Madaxweyne Siilaanyo Oo Qalinka Ku Duugay Dhaqangelinta Miisaaniyadda Qaranka Ee 2011
Hargeysa(ANN) Madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) ayaa maanta soo saaray xeer uu ku dhaqan gelinayo miisaaniyad sannadeedka xukuumadda cusub ee 2011, taas oo golaha wakiiladu ansixiyay todobaadkii hore. Kadib markii ay
dood iyo falanqayn ka yeesheen.
Sidaana waxa lagu sheegay qoraal saxaafadeed kasoo baxay Madaxtooyada Somaliland oo ku saxeexan yahay Af-hayeenka Madaxtooyada Somaliland C/llaahi Daahir (Cukuse), kaas oo u qoraan sidan:- “Madaxweynaha JSL Mudane. Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) waxa uu soo saaray Xeer Madaxweyne oo lagu Dhaqan gelinaayo Miisaaniyad Sannadeedka 2011-ka ka dib markii ay Golaha Wakiiladu Aqlabiyad ku ansixiyeen.
Markuu Arkay: Qodobka 90-aad ee Dastuurka Jamhuriyada Somaliland.
Markuu Arkay: Qodobka 75-aad ee Dastuurka Jamhuuriyada Somaliland.
Markuu Arkay : Go’aanka Golaha Wakiilada, Go’aan Lr. GW/Kf-14/509/2011 ee ku Suntan 07/03/2011 ee ay ku ansixiyeen Miisaaniyada 2011_ka ee Dawladda Dhexe, Dekedda Berbera, Dakhliga Haamaha iyo Lifaaqyada Miisaaniyadda Ku lammaan.
Wuxuu Soo Saaray Xeerkan oo lagu baahinayo dhaqan-galka Miisaaniyad Sanadeedka 2011-ka ee Dawladda iyo
Lifaaqyada Miisaaniyada Ku Lammaan.” Ayaa lagu yidhi qoraalka kasoo baxay Madaxtooyada Somaliland.